२०७८ जेष्ठ १४, शुक्रबार ०५:५६
सिरहा । जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथ क्लथ वैक नेपालका अध्यक्ष राजीव झा समाज सेवामा निकै सक्रिय छन् । उनी कोरोना भाइरसको महामारीमा देशका कुना काप्चामा पुगी जनताको सेवामा समर्पित छन् । साथै देशको राजनीतिक घटनामा पनि उनको भूमिका उत्तिकै छ । झासँग राजधानीपाटीका लागि गरेको कुराकानीः
कार्यकारिणी समितिमा त तपाईँहरु अल्पमतमा हुनु हुन्छ नि त ? उपेन्द्र यादव, डाः बाबुराम भट्टराई बहुमतमा हुनुहुन्छ ?
त्यसोभए तपाईँको पार्टीबाट कतिजना मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ रु र कुन कुन मन्त्रालय पाउनु भयो तपाईँहरुले ?
त्यसोभए सरकारमा जाँदा कुन कुन मन्त्रालय पाउँनु हुन्छ त रु गृह मन्त्रालय तपाँईले दावि गर्नुभएको छ ?
यो मुलुकको रक्षा गर्ने हामी भुमिपुत्रहरु हौँ । हमीहरु यो देशको रक्षा गर्ने, हामी भुमिपुत्र नेपाली हौँ । हामीहरुलाई मौका नै बनेको छैन, कमैमात्र मौका बनेको छ । मधेशवादी दलबाट गृह मन्त्री बन्न यो देश एक ढिक्का हुनको लागिपनि मधेशवादी दलबाट यदि गृह मन्त्री वनाईयो भने हाम्रो समस्याहरु समाधान हुनको लागि पनि गृह मन्त्री या रक्षा मन्त्री जस्तो महत्वपुण मन्त्रालयहरु दिनको लागि उदारता देखाउनु पर्दछ ।